कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका पल्टाउदै गरेको टिकटक पुरै भाईरल बन्यो ! हेर्नुहोस - Samaj Patra
भदौ ३१, २०७८ भदौ ३१, २०७८ - by Samaj Patra
अहिले टिकटक सबैको लोकप्रिय बनेको छ । आफुमा भएको प्रतिभा देखि लिएर हास्यास्पद भिडियो हालेर धेरै भियुज तान्नेको होडबाजी नै चलेको छ । यस्तै एउटा भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाईरल भएको छ ।
कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिकाको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा भिडियो भाइरल भएको छ । जसमध्ये एउटामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लेखिएको उत्तरपुस्तिका पल्टाइरहेको सजिलै देख्न सकिन्छ ।
संक्रमणको जोखिमका कारण दुई पटक स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा बुधबारदेखि शुरु भएको हो । चार हजार ३१५ परीक्षा केन्द्रमा पौने चार लाख परीक्षार्थी सहभागी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
Previous Article ह स्तमै थुन गर्न बढी रुचाउने केटा कि केटी ?
Next Article ग्रहचक्रमा सूर्य ग्रहको ठूलो परिवर्तन, यी ४ राशिका मानिस रहनुहोस् सावधान, कुन-कुन ?